स्टेज कार्यक्रममा पिडा छ – जमूना सनम – Himal FM 90.2 MHz
कला र साहित्य पूर्वका खबर adminhimal May 10, 2017
लोक दोहोरी गायिका जमूना सनम अर्घाखाँची जिल्लामा जन्मिएकी हुन् । उनले लोक क्षेत्रमै एक दशक विताईसकेकी सनम २०६२ साल देखि प्रतियोगितात्मक दोहोरी हुदै व्यवसायीक गायनमा प्रवेश गरेकी हुन् ।
‘रातो घलेकीमा’ उनले गाएको मध्येको सर्बाधिक चर्चा पाएको दोहोरी गीत हो । उक्त गीत कुशल बेलवासेले लेखेका थिए । गायिका सनमले पछिल्लो समय ‘बानी मेरो यस्तै हो’ बोलको दोहोरी गीत बजारमा ल्याएकी छिन् । सागर विरहीको सृजनामा तयार भएको गीतमा रमेश पाण्डे ‘छवि’ संग स्वर भरेकी छिन् ।
पछिल्लो समय मार्मिक डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोको व्यवस्थापनमा लागेकी छिन् । उक्त स्टुडियो सागर विरही, मान बहादुर बरालसंगको त्रिपक्षिय सहकार्यमा संचालनमा ल्याइएको हो । गायिका जमूना सनमलाई केहि प्रश्न सोधेका छौ ।
रेकर्डिङ स्टुडियो खोल्नु भएछ, दोहोरी गाएर भनेजति पैसा कमाउन सकिएन, हो ?
म आफू सन्तुष्ट छु । वास्तविक लोकदोहोरी गीतलाई माया गर्ने स्रोता दर्शकले मलाई माया गर्छन् । किनभने म उत्ताउलो भएर हिडेको छैन्, हिड्दन पनि । म उत्तालो गीत गाउने खुवि पनि छ तर म त्यसो गर्दिन । मलाई थोरैले रुचाउन् तर राम्रा मान्छेले रुचाउन् । म यहि चाहन्छु ।
जमूना घमण्डी छे, भन्छनी ?
म संग नजिकवाट व्यवहार नगर्नेले घण्मडी भन्नु स्वभाविक हो । तर, मलाई चिन्नेहरु खरो स्वभाव भएको महिलाको रुपमा चिन्छन् । अब तपाई के भन्नुहुन्छ ? म कसैलाई चिप्लो घस्न जान्दिन ।
तपाईलाई स्टेज कार्यक्रम धाउन जाँगर चल्दैन्, सुनेको थिए कति सत्य हो ?
सत्य हो, स्टेज कार्यक्रममा पिडा छ । कार्यक्रममा मेरो फोटो राखेर प्रसार गरिन्छ तर अन्य कलाकारलाई लगेर कार्यक्रम गरिन्छ । बोलेको रकम नदिने, विचौलियाहरु मोटाईरहेको अवस्थामा उचित पारिश्रमिक विना देशदौडाह गर्न मन छैन् । कसैलाई रिजाएर स्टेज धानु पनि छैन् । अर्को कुरा त मेरो जागिर पनि भएकाले धेरै डुल्न पनि भ्याउदिन ।
अहिले कलाकार पिच्छे कम्पनी र यूटुव च्यानल आवश्यकता छ ?
छ । किनकी, मैले अहिलेसम्म गीतमा लाखौ लगानी गरेर बजारमा पठाउन विभिन्न कम्पनीलाई दिए तर प्रतिफल एक रुपैया हात परेन । आफ्नो लगानी र सम्पत्तिलाई अधिकार जमाईराख्न र आउने थोरै रकम भएपनि आफैले सदुपयोग गर्नका लागि यूटुव च्यानल संचालनमा ल्याएको हूँ । आफ्ना गीतहरु आफ्नै कम्पनी र च्यानल मार्फत सार्वजनिक गर्छ ।